यौन / स्वास्थ्य – ABC KHABAR
आँखा भएन भने के होला ? यो प्रश्नले समेत हाम्रो शरीरमा कम्पन पैदा गर्छ । जब आँखाको दृष्टि कमजोर हुन्छ, हाम्रो दिनचर्या पुरै परिवर्तन हुन्छ । हामी चाहे जसरी शारीरिक […]
December 20, 2017 ABC Desk यौन / स्वास्थ्य
खोटाङ , असार ५ । रुपाकोट मझुवागढी १३ नुनथलामा झाडा पखाला रोगको प्रकोप बढेको छ । स्वास्थ्य चौकी नुनथलाका अनुसार हिजो र आज गरि करिब तीस जना जति पखालाका बिरामी […]
June 19, 2017 News Desk यौन / स्वास्थ्य, समाचार
June 19, 2017 June 19, 2017 News Desk यौन / स्वास्थ्य, समाचार
खोटाङ, १७ जेठ । रुपाकोट मझुवागढी वडा नँ १३ नुनथला खोटाङलाइ पुर्ण खोपयुक्त वडा घोषणा गरिएकोछ । “स्थानिय श्रोतको उपयोग स्वामित्व र सहभागिता , पुर्ण खोपयुक्त रुम नपा १३, हाम्रो प्रतिबद्दता […]
May 31, 2017 ABC Desk यौन / स्वास्थ्य, समाज
एविसि खबर फलेवास, २७ कात्तिक । जिल्ला अस्पताल पर्वतमा औषधि अभाव भएको छ । सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि पर्वतमा अभाव भएको हो । पर्वतमा ज्वरो आउँदा खाने सिटामोल, गर्भवती महिलाले […]
November 12, 2016 ABC Khabar यौन / स्वास्थ्य
एविसि खबर काठमाडौं १७ असोज । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का आवासीय चिकित्सकहरुले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा मंगलबारबाट ओपीडी लगायतमा काम नगर्ने भएका छन् । ओटि इर्मजेन्सिमा भने काम […]
October 3, 2016 ABC Khabar यौन / स्वास्थ्य
क्षतिपुर्ति नपाए लाश नबुझ्ने एविसि खबर खोटाङ, २० भदौ । अस्पतालको चरम लार्पाबाहीले महिलाको ज्यान गएको भन्दै मृतकको आफन्तले क्षतिपुर्तिको माग गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा पाठेघर सफा गर्न गएको […]
एविसि खबर काठमाडौं, ९ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्न गएका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीका समर्थकलाई प्रहरीले लाठी हानेको छ, केहीलाई धरपकड गरेको छ । यसक्रममा […]
एविसि खबर काठमाडौं, ६ असार । मानिसलाई हुने धेरै प्रकारका विभिन्न तनावमध्ये खाना पनि एक रहेको छ । मानिसलाई जव समस्याले घेर्छ अनि तनाव हुन्छ । जस्तै बिमारी, आर्थिक संकट, […]
एविसि खबर भक्तपुर, ३० जेठ । मध्यपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कोरिया नेपाल मैत्री अस्पताल मध्यपुरथिमिमा चारदिने निःशुल्क प्लास्टिक शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न भएको छ । दक्षिण कोरियाको रोज क्लब संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालित […]
June 12, 2016 ABC Khabar यौन / स्वास्थ्य